Xarunta soo-galootiga | Fedasil info - informatieplatform voor asielzoekers in België
Gudaha xarunta qaabilaada
Xarunta soo-galootiga ee ku taala Brussels waa goobta ay dadka ajaanibta ah ay ka diiwaangelin doonaan codsigooda magangelyo gudaha Biljimka.
Xarunta soo-galootiga? Xaruntani waxay ku taallaa 'Petit-Château' magaalada Brussels. Waa halkani meesha aad ka codsan karto magangelyada caalamiga ah.
Xarunta soo-galootiga waxaa maamula Fedasil, oo ah hay'ada dawladda Biljimka. Codsigaaga ah magangelyada caalamiga ah ayaa waxaa xarunta ka diiwaangelinaya hay'ad dawladeed oo kale: Xafiiska Socdaalka.
Gudaha xarunta, waxaad heli doontaa buug-yaraha macluumaadka kaasoo sharixi doona waddada aad u marayso xarunta soo-galootiga. Buug-yarahan waxaa lagu heli karaa luuqaddo dhowr ah.
Marka aad diiwaangeliso codsigaaga magangelyada, sarkaal ka socda Xafiiska Soo-galootiga ayaa ku weydiin doonaa su'aalo si uu u ogaado aqoonsigaaga (magaca, taariikhda dhalashada, qaranka, iwm.). Wuxuu sidoo kale kaa qaadi doonaa faraha. Tani waxay u oggolaaneysaa inay hubiyaan haddii aad horayba uga diiwaan gashan tahay dal kale oo Yurub ah. Haddii aad tahay, waxaad u baahan kartaa inaad u laabato wadankan si aad uga codsato magangelyo caalami ah halkaas.
Waxaad sidoo kale heli doontaa baaritaan caafimaad oo lagu hubinayo inuu caafimaadkaaga wanaagsan yahay. Waxaan sidoo kale raajo ka qaadi doonaa sambabkaaga si aan u aragto haddii aad qabto qaaxo.
Entrance arrival centre
Goobta soo dhaweynta
Gudaha goobta soo dhaweynta, Fedasil ayaa hubin doonta inaad xaq u leedahay soo dhaweyn iyo in kale inta lagu jiro qiimeynta codsigaaga magangelyada. Haddii ay sidaas tahay arrintu, Fedasil ayaa kaa siin doontasoo-dhaweynta ugu koowaad xarunta soo-galootiga, oo la jaanqaado xaaladaada, waqtiga la raadinayo goob qaabilaad kale oo ku taala Biljimka.
Sida loo aado xarunta soo-galootiga?
Xarunta soo-galootiga waxay ku taal bartamaha magaalada Brussels: Rue de Passchendaele 2 – 1000 Brussels.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan xaaladdaada inta aad joogto gudaha Biljimka, waxaad weydiin kartaa Goobta Macluumaadka ee xarunta soo-galootiga:
Telefoonka: +32 (0)2 227 41 51
Cinwaanka xarunta soo-galootiga
Khariiradadaha Google (Google Maps)
Xafiiska Socdaalka Diiwaangelinta codsigaaga